राजनीतिक दलका प्रमुख नेता एउटै टेवुलमा ह्विस्की पिइरहँदा मेरा गाउँका दाजुभाईको पानी पँधेरो अलग– अलग किन ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
राजनीतिक दलका प्रमुख नेता एउटै टेवुलमा ह्विस्की पिइरहँदा मेरा गाउँका दाजुभाईको पानी पँधेरो अलग– अलग किन ?
यता शहरमा बाहिर बाहिर एक अर्काका प्रतिस्पर्धी देखिएका एक अर्कालाई गाली गलोच गर्न समेत पछि नपर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु साँझ एउटै टेवुलमा ह्विस्कीको चुइस्की लिइरहँदा मेरो गाउँमा भने आफ्नै दाजुभाई राजनीतिको नाममा लडिरहेका छन् । अहिलेसम्म कुनै अप्रिय घटना सुन्न परेको छैन, आशा छ त्यस्तो घटना सुन्न पनि नपरोस ।
मेरो गाउँ जहाँ म जन्मिएँ हुर्किएँ जहाँका हरेक मानिस मलाई प्यारो लाग्छन,मैंले कसैलाई पनि त्यहाँ राजनीतिक नजरले हेरिन ।तर, अहिले गाउमा हरेका मानिसलाई राजनीतिक नजरले हेर्न थालिएको रहेछ । अहिले त गाउँमा मानिस छिर्ने वितिक्कै कुन पाटीको मानिस आयो के गतिविधी गर्दछ भन्नेमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित हुदो रहेछ । मैले त गाउका सबैलाई आफन्त ठान्थें,शहरमा भन्दा गाउँमा बढी सौहार्दता छ भन्थें । तर हिजोआज ठिक त्यसको विपरित भएको मैले महशुष गरें ।
गाउका महिला जति सबैलाई आमा,दिदी,बहिनी त पुरुष जतिलाई काका,बुवा दाई भन्ने मेरो गाउको संस्कारमा अहिले त निकै परिवर्तन आइसकेछ । । अहिले त घरैपिच्छे को कुन दलको भनेर पो गणना हुन थालेछ । को कुन पाटीको हो, पाटी भित्रको पनि कुन गुटको हो यसरी हेरिदोरहेछ । हिजो अस्तिका साथिसंगी हितैषी आज सबै राजनीतिक प्राणी बनिसकेका रहेछन् । हो यस्तै रहेछ अहिले नेपालका दुर दराजका गाउ अनि वस्तिहरुमा । यसलाई चुनावी वातावरण भनु कि के भनु मैले चाहि नाम दिन सकिन तपाइहरुको शव्दकोषमा यदि यस्को व्याख्या भए पाठकबाटै पाउने अपेक्षा गरको छु ।
शहरका मानिसले राजनीति बुझेका रहेछन भन्ने कि गाउँकाले ? यतिखेर यो प्रश्न एकदमै टड्कारो देखिएको छ । वास्तवमा मेरो बुझाईमा राजनीतिमा शहरका मानिस भन्दा गाउँका मानिस धेरै अगाडी रहेछन् । अनि चुनाव पनि क्या सारो लागेको हो । रमाईलो कुरा त के छ भने हिजोआज त गाउँमा गाउले दाजुभाइहरु चिया समेत एकै ठाउमा बसेर पिउन छाडेछन । गाउँमा ठान्थेंराजनीतिले यतिधेरै गाउँलाई गाँजेछ त्यसको वर्णन शव्दमा असम्भव छ । राजनीतिले आफ्नै गाउले दाजुभाइको चिया पसल अलग, पानी पँधेरो अलग ,यति सम्मकी हिजो गाउँ गाउँका मानिस एक अर्कासँग दिल खोलेर पनि बोल्न हिच्कीचाउँदा रहेछन् ।
जहिले पनि नेताले यो देश विगारे भनेर सराप्ने गाउँका मानिसहरु चुनावसँगै यति धेरै तात्एिछन कि उनीहरु आफ्ना खेतबारीका काम नै छाडेर राजनीतिक दलका भाषण सुन्न तम्सदारहेछन् । चुनावकै कुरा गर्ने हो भने शहरका मानिसलाई भन्दा गाउँका मानिसलाई चुनावले बढी छोएको अनुमान गर्न सकिन्छ । शहरमा मानिसहरु बढी व्यस्त रहने हुनाले राजनीतिक व्यक्तित्व भन्दा अरुलाई चुनावले खासै नछोएको तर गाउँमा भने सिंगो गाउलाई नै चुनाव लागेको भान पाउन सकिन्छ ।
तर जे होस चुनाव हो त्यसमा पनि स्थानिय निकायको आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर यसको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसका साथै सबै गाउँ शहरबासीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहि के हो भने गाउँले दाजुभाइ र छिमेककाबीच सौहार्द व्यवहार भने कायमै राख्नुपर्छ । विचार आ आफ्नो हुन्छ,तर अरुको विचार पनि सुन्न सक्नु्पर्छ ,कसैले गरेको आलोचना पनि सुन्न सक्नुपर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडी बढ्ने र आलोचना सुन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने हो भने चिया पसल र धारो परिवर्तनको कुनै आवश्यकता रहन्न कि ?